त्रिशूलीमा खसेको बसमा भेटिएका यी ना-बालक को हुन् ? अझै पत्तो लाग्न सकेन! – Rastriyapatrika
-आनन्द पोखरेल !
चितवन । पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको चुम्लिङमा यात्रु बस र ट्रक ठोक्किदा भएको दुर्घटनामा ८ जना यात्रुको ज्यान गएको छ ।
सात जनाको ज्यान गएको र २५ जना घाइते भएको यो घटनामा परेका बालकको अहिले भरतपुरको सानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । गम्भीर अवस्थामा रहेका ती बालकको गम्भीर अवस्थामा उपचार भइरहेको छ । चिकित्सकहरुले सबै घाइतेहरुको उपचार जारी रहेकाले तत्काल केही पनि नबोल्ने बताएका छन् ।
एकजनाको मात्रै सनाखत !!
बसका सहचालक सुनील क्षेत्रका अनुसार बसमा ३२ जना सवार थिए । २४ जना घाइतेमध्ये १५ जनाको चितवनको पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ ।दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका तीनजनालाई एम्बुलेन्स र दुईजनालाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ लगिएको छ । चारजनाको स्थानीय मनकामना पोलिक्लिनिकमा उपचार भइरहेको पन्तले बताए ।
-जनता समाचार बाट साभार गरिएको